အမျိုးအစား: အလှအပနှင့် Spa မ်ား
mesotherapy ထက်အန္တရာယ်? အဘယ်အရာကိုအသက်အရွယ်ကနေလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်? ဤနည်းလမ်းကိုအများအပြားမေးခွန်းထုတ်: က mesotherapy, mesotherapy ရှိမရှိအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်အန္တရာယ် Is အဘယ်ပြဿနာများ mesotherapy ပြီးနောက်ပေါ်ပေါက်နိုင်, များအတွက် contraindications ဘာတွေလုပ်နေလဲ ...
နှင့်ထိုကဲ့သို့သော SPA ကုမ္ပဏီလော ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြ! ယခုအချိန်တွင်, ရုရှားအတွက်စကားလုံး spa အများစုမှားယွင်းနေအသုံးပြုသည်။ spa စင်တာများတစ်ဦးအနှိပ်အရပ်၌အရာအားလုံးစင်တာများခေါ်။ တကယ်တော့ဒီအ ...
112-B Lenin Avenue, Tula ရှိ "Modern modern rejuvenation technology" ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ၌နေသောမိန်းကလေးများအားနှုတ်ခွန်းဆက်သသည်။
Lenin Avenue 112-B, Tula ရှိ Modern Center of Rejuvenation” ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာတွင်ရောက်ရှိနေသောမိန်းကလေးများအားနှုတ်ခွန်းဆက်သသည်။ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်မှစ၍ စင်ကာပူတွင်မျက်နှာအသားအရေသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းကိုငါခံယူခဲ့သည်။ ငါရလဒ်ကိုလည်းကျေနပ်မိပါတယ် ...
အရေပြား Berchet drawing အပေါ်တစ်ဦးပုံစံနှင့်အတူတစ်ဦးလွှဲပြောင်းစာရွက် (s ကိုလေဆာပရင်တာ!) လက်ရုံးနှင့်စိုစွတ်စေသောအရည်လက်သည်းဆိုးဆေး remover မှလျှောက်ထားပါသည်အတိုင်း, အဆင်သင့်ဆပ်ပြာ lathering, ဖက်တီးငါးပိပုံစံပုံ encircles ...
နက်ရှိုင်းသော blackheads ဖယ်ရှားပစ်ရဘယ်လိုနေသလဲ? သင်သည်သင်၏အစားအစာပြင်ဆင်လိုလျှင်, အခြို့ sorbent အားဖြင့်အဆိပ်၏ကိုယ်ကိုဆေးကြောသန့်စင်ဖို့, ဥပမာ, ညာဘက်ကိုသွားပါ, ဥပမာ, ငါ polisorb ယူ. , ရလဒ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ + သင်တန်း ...
မိန်းကလေးငယ်များ, တစ်ယောက်ယောက်ကမျက်တောင်အရှိန်မြှင့်? ရလဒ်ကိုပျော်ရွှင်? ဘယ်လိုမကြာခဏကဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းနှင့် lope တန်ဖိုးရှိအောင်လိုအပ်သနည်း အဆင်ပြေ! ကျေးဇူးပြုပြီး! သတိထားဝတ်ထား 1-1,5 လအတွင်းအတူ 600 ရူဘယ်ထဲကနေစျေးနှုန်းများ, ဘယ်မှာလုပ်ဖို့ရှာနေ! သွားကြဖို့နှစ်ပေါင်း ...
အဘယ်အရာကိုဤနေရာတွင် shugaring http://shugaring-profi.ru/ shugaring ခဲ့ဘူး)) ကပင်ထိခိုက်စေပါဘူးဖြစ်ပါသည်) hypoallergenic နည်းလမ်း Shugaring .... ရာရာခိုင်နှုန်းကိုသဘာဝပုံသေနည်းဓာတုသည်ဆံ့မခံပါဘူး ... အပူလောင်ခြင်းနှင့် vasodilatation များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဖယ်ရှား .... ...
မကျြတောငျမှေးလျှင်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်? ခေတ္တမျှ .. )) .. သေချာပေါက် povypadali) ငိုမယ်, ဒါပေမယ့်သိပ်နောက်ကျ .. )) ဝမ်းနည်းခြင်းမျက်ရည်မကူညီကြလိမ့်မည်။ )) ဤလှပဒီတော့တောင်းပန်ပါတယ်အမှိုက်သရိုက်ခံရ၏။ မကျင့်, တစ်ဦးကလှပသောမိန်းကလေး ...
ဖယောင်း strips တွေအတွက်ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ဧရိယာထဲမှာဆံပင်ကိုဖယ်ရှားကူညီရန်? ထိုရိတ်ပင်ပန်းသည်နှင့် zarostaet ချင်ပါဘူး! ရှိမရှိ 1 ရုံကြိုးစားပြီးတော့သင်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းထွက်သင်တုန်းနားလည်ပါလိမ့်မယ်။ နာကျင်မှုရိုင်း! ဖယောင်း ...
လှပတဲ့ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူငါ့ကိုတက်ကူညီကူညီပါ !! မိန်းကလေးတွေလမ်းလျှောက်ပြီးယောက်ျားတွေကသူမနောက်ကွယ်မှာသူတို့ကို“ စုပုံ” အောင်လုပ်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, ဆဲ retro ပုံစံ၌တည်၏။ အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ သေချာတာပေါ့၊ လူတိုင်းမှတ်မိကြလိမ့်မယ် ...
cabin ထဲမှာမျက်နှာသန့်စင် ... အထွက်ထိရောက်သောကဘာလဲ?
မျက်နှာသန့်ရှင်းရေး ... အထိရောက်ဆုံးသောကဘာလဲ? အလှပြင်ဆိုင်အတော်များများတွင်ဝက်ခြံပျောက်ကင်းစေသည့် ၀ န်ဆောင်မှုရှိသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ထိရောက်မှုရှိပါက၊ ဘယ်သန့်ရှင်းရေးပိုကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး - လက်စွဲစာအုပ်လား၊
မျက်ခမ်းကိုဆင်း-နှငျ့သငျစျေးကြီးလိမ်းဆေးနှင့် Salon ပေါ်တွင်လူကြိုက်များချက်ပြုတ်နည်းများများအတွက်အိမ်မှာငွေမရှိသောလုပျအကြောင်း, flabby ဖြစ်လာသည်။ ၏မျက်ခမ်းအပေါ်မှာလိမ်းလုပ်ဖို့ကောင်းကောင်းလည်း http://p-style.com.ua/info.articles/253.html ပျော့အနှိပ်နေ့တိုင်း ...
သူတို့ကိုရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့လဲမဆိုပိုကောင်းကတ်ကြေး hairdressing? အဘယ်အရာကိုအမှတ်တံဆိပ်? ဒီကတ်ကြေးသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးစုံတွဲဖြစ်ပါတယ်လျှင်, သင်အရမ်းစျေးကြီးမဝယ်သင့်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းစျေးအသက်သာဆုံးရကျိုးနပ်မဟုတ်ဘူး။ ၏စျေးနှုန်းအကွာအဝေးမှာကြည့်ပါ ...
အဘယ်သူသည်မျက်နှာအရည်နိုက်ထရိုဂျင်ခဲ့သလဲ ဒါဟာအရာအဘို့ကယေဘုယျအားဖြင့်အထူးသ, အလုပ်လုပ်တယ် ?? လက္ခဏာများ Cryomassage in: အရေပြားလျှော့ချ turgor နှင့် elasticity အားနည်း krovoobrascheniem.otchnaya pasty အသားအရေနှင့်အတူပထမဦးဆုံး morschinki.anemichnaya အရေပြား, ...
ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့သင့်ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ဧရိယာရိတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? နှင့်အကျိုးဆက်များကိုဘာတွေလုပ်နေလဲ? အဘယ်? အိုးရိတ်သို့မဟုတ်မခံနိုင်သောလျှင်ရိတ်, ဒါပေမယ့်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအဖြစ်အလှပြင်ဆိုင်ဆံပင်ဖယ်ရှားရေးအထိလက်မှတ်ရေးထိုးရန်ကြပါဘူး။ ငါလုပ်ခဲ့တယ် ...
တက်တူး drawing ရှေ့တော်၌ထိုခန္ဓာကိုယ်ဖို့စက္ကူကနေလွှဲပြောင်းဖို့ကိုဘယ်လို ??? တစ်ဦးအရက်အတူပုံ Berchet ရေမွှေးနှင့် polotentsepshikaesh patterned စက္ကူနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း telaprikladyvaesh nadavlivaeshi သည်2မိမှတဆင့်ရေမွှေး pshikat ...
ဘယ်လိုမျက်စိပေါ်တွင်စက်ဝိုင်းဖယ်ရှားပစ်ရန်ညအချိန်တွင်အရည်တွေအများကြီးကိုမသောက်ရ Tonalka! သင်သည်ထိုသူတို့ကိုသုံးပါလျှင်လက်ျာမျက်စိမုန့်ပေါ်ချော်! ထိုအခါခေါင်းအုံး၏အောက်ဆုံးမျက်နှာပေါ်မှာအိပ်မကြိုးစား! ကံကောင်းပါစေ :)))))))) ...
ဖြစ်စဉ်ကိုငြိမ်းစေလျက်တက်တူးနောက်ဆုံးအဖြစ်ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်လုပ်ဖို့သလဲ? zazhi ဖြစ်စဉ်ကိုဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုမှန်, ငါသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရရုပ်ရှင်နောက်ပိုင်းမှာဆပ်ပြာနှင့်ရေနှင့်အတူချွတ်ဆေးကြောပြီးတော့အပေါ်နံ့သာဆီနှင့်လိမ်းတစ်နာရီယူ ...
ငါ့ကိုပြောပြပါ! ငါဆံပင်ရွှေရောင်ဆေးဆိုး။ အဘယ်အရာကိုအရောင်ယခုလည်းလိုက်စားကြည့်ရှုလိမ့်မယ်လို့မျက်ခုံးလုပ် ??? မိတ်ကပ်ဆံပင်ရွှေရောင်: ဒါဟာအညိုရောင်ဆံပင်နှင့်အတူအမျိုးသမီးအလင်းအသားအရေအရောင်တခုတခုအပေါ်မှာပုံကြီးချဲ့အလေးပေးရန်မှားယွင်းနေသည် ....
မိတ်ကပ်ပညာရှင်ဘယ်သူလဲ ??? မိတ်ကပ်အနုပညာရှင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကဘာလဲ ?? မိတ်ကပ်အနုပညာရှင်သည်မိတ်ကပ်ပညာ၏အထူးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပြီးမိတ်ကပ်အနုပညာပစ္စည်းများ အသုံးပြု၍ ပုံရိပ်တစ်ခုဖန်တီးသည်။ မိတ်ကပ်ပညာရှင်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ မိတ်ကပ်အနုပညာရှင် - စတိုင်လ်သူ - ပန်းတိုင်ရှိသူနှင့်အလုပ်လုပ်ပါ။
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 2,514 စက္ကန့်ကျော် Generate ။